Taorian'ny fandrosoana sy fanavaozana nandritra ny 10 taona mahery, GreenPlains dia lasa mpamokatra vokatra manondraka sy malaza eran'izao tontolo izao ao Shina. Eo amin'ny sehatry ny famokarana vokatra fanondrahana, GreenPlains dia nanangana ny teknolojia sy ny tombony ho an'ny marika. Indrindra eo amin'ny sehatry ny valizy PVC, Filter, Drippers, ary Mini Valves ary Fittings, GreenPlains dia lasa iray amin'ireo marika malaza ao Shina.
GreenPlains dia miavaka amin'ny R&D, famokarana ary marketing amin'ny vokatra fanondrahana. Ny atrikasa famokarana dia manana bobongolo maherin'ny 400. Ny famokarana dia misy valizy Ball Ball, Valizy lolo an'ny PVC, Valizy fanamarinana pvc, valizy an-tongotra, valizy fanaraha-maso hidrolika, valva-rivotra, sivana, tsiranoka, mpamafazana, kasety mitete, ary valizy Mini, Fittings, Clamp Saddle, Injectors pupuk Venturi, PVC LayFlat Hose ary Fittings, Fitaovana ary vokatra maro hafa. Vokatra sy haitao maromaro no nahazo ny patanty nasionaly.
Ahoana no handresentsika
Ekipa R&D matihanina, manome serivisy fijanonana tokana izahay avy amin'ny famolavolana vokatra, famolavolana bobongolo & fananganana hatramin'ny fanamboarana vokatra;
Nahazo ny fanamarinana rafitra kalitao ISO9001 avy amin'ny SGS izahay. Vonona amin'ny rafitra fitantanana mandroso sy ny ekipa fitantanana be pitsiny izahay. Izahay dia manara-maso sy manara-maso ny fizotrany rehetra manomboka amin'ny fametrahana PO hatramin'ny fandefasana entana ho an'ny baiko rehetra amin'ny alàlan'ny ERP, MES, rafitra fitantanana trano fitehirizana dimensional ary rafitra rafitra kalitao ISO9001; mifehy ny kalitaon'ny vokatra tsirairay izahay ary manome vokatra sy serivisy mahomby ho an'ny mpanjifantsika manerantany.